China chinjikira mahwanda moto-kurwa pombi fekitari uye vagadziri | Liancheng
SLO (W) Series Split Double-kubvisa Pump hunovapo pasi vagari zvinoitwa vaongorori vakawanda esayenzi Liancheng uye nemhaka hwakatangwa yemhando ruzivo German. Kuburikidza bvunzo, zvose kuita maindex vanotungamirira pakati dzimwe zvakafanana zvigadzirwa.
dzakatevedzana iyi pombi iri ane chinjikira uye kutsemura mhando, pamwe zvose pombi casing uye pabutiro Raizotsemuka nechepakati mutsara nomubato, zvose mvura Inlet uye nzira yokubudisa uye pombi casing chakakandirwa integrally, munhu wearable rin'i yakatarwa pakati handwheel uye pombi casing, kuti impeller axially wakaiswa pamusoro ane kwakavharwa nenyama kanganisa mhete uye zvokuimba mucherechedzo zvakananga akatasva nomubato, pasina muff, achideredza zvikuru basa kugadziriswa. Nomubato chakagadzirwa Stainless esimbi kana 40Cr, ari kurongedza rakavhara mamiriro yakaiswa aine muff kudzivirira nomubato kubva vaneta kunze, kuti mabheyaringi vari pachena bhora inobereka uye cylindrical chinotenderera kubereka, uye axially wakaiswa pamusoro kanganisa mhete, hapana neshinda uye nati pamusoro nomubato chete-Danho kaviri-kubvisa pombi kubvongodzwa vatungamirire pombi inogona kuchinjwa saka pa kuda pasina chikonzero kuritsiva uye impeller akaita nemhangura.
indasitiri moto-kurwisa maitiro
S.: Max 25bar
dzino pombi kutevedza tsika GB6245
Previous: chinjikira multi-Danho moto-kurwa pombi
Next: chete-Danho moto-kurwa pombi
Diesel Engine Fire-Kurwisa Emergency pombi
abudise Pump, Double Suction Split Case Pump, abudise kupomba Machine , Vertical Inline Pump,